မော်နီကာဆန် | | ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း
ပုံ - Tangierisland-va.com
ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသောကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာတိုင်များအရည်ပျော်မှုကြောင့်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ကြည့်ရှုနေစဉ်ရာစုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ဗင်းနစ်၊ ဟောင်ကောင်၊ ဘူနင်အိုက်ရှားသို့မဟုတ်ဆန်ဒီယာဂိုကဲ့သို့သောမြို့များစွာရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်းများမှာပျောက်ကွယ်သွားပြီးဖြစ်သည်။ tangier ကျွန်း.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဗာဂျီးနီးယားကမ်းရိုးတန်းတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ပင်လယ်တိုက်စားမှုနှင့်ကြုံတွေ့နေရပြီးဖြစ်သည်။ ၁၈၅၀ ခုနှစ်မှစ၍ ၄ င်း၏မြေထု၏သုံးပုံနှစ်ပုံဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် လာမယ့်နှစ်ပေါင်း 40 အတွင်းလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ဘူး.
အမျိုးသားသမိုင်းဝင်နေရာများစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသောဤကျွန်းသည် 2,6 စတုရန်းကီလိုမီတာareaရိယာရှိပါတယ်။ ဤတွင်နေထိုင်သူ ၄၅၀ ရှိပြီးအများစုမှာကျွန်းပေါ်တွင်မျိုးဆက်များစွာနေထိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့ထဲမှတစ် ဦး မှာငါးဖမ်းသမားများ၏ဆွေမျိုးဟောင်းမှဆင်းသက်လာသူကာရယ်လ်ပရင်itt Moore ဖြစ်သည်။
ထိုကာလ၌အဆုံးတိုင်အောင်၎င်း၊ ယခုဆယ်မိနစ်သာကြာသည်။ “ တန်ဂျီးယားကိုမကယ်တာဟာဝမ်းနည်းစရာပဲ CNN က။ ရယ်စရာကောင်းသည်မှာဤသေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းမှလူအများစုသည်ဥက္ကclimate္ဌ Donald Trump အားရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်လူသားများကြောင့်မဟုတ်ဟုသူကပြောသည်။ စုစုပေါင်း, သူသည်ကျွန်းပေါ်တွင်မဲ ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့သည်။
အမေရိကန်ကြည်းတပ်အင်ဂျင်နီယာကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူအဏ္ဏဝါဇီဝဗေဒပညာရှင်ဒေးဗစ် Schulte ကဆန့်ကျင်ဘက်စဉ်းစားသည်: ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်တန်ဂျီးယားတိုက်စားမှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်နေသည်။ “ သဲသောင်ပြင်အထက်မှာသက်ရောက်မှုရှိအောင်ရေကအခုဆိုရင်မြင့်နေပါပြီ။
အခြားကျွန်းများနှင့်မတူဘဲ, တန်ဂျီယာသည်နစ်မြုပ်နေသောသဲတောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အော်ဂဲနစ်ရွှံ့မြေများရှိပြီးအလွန်ပျော့ပျောင်းသောကြောင့်ရေသည်၎င်းကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်နိုင်ပါက၊ ထို့ကြောင့်ဤဗီဒီယိုတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။
နေထိုင်သူများ၏ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ်မည်သို့ပင်ရှုမြင်သည်ဖြစ်စေ၊ တိုက်စားမှုကိုရပ်တန့်ရန်တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ရမည်ဟုလူတိုင်းကသဘောတူကြသည်။ ဒီအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြို့တော်ဝန်ဂျိမ်းစ်အက်စစ်ဂျင်ကတွန်းအားပေးနေပါတယ် အသစ်သောမြို့ရိုးကိုတည်လော့ သူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့။ သို့သော်စီမံကိန်းကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်ကိုမြင်ခြင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတတ်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်၎င်းသည် ၂၀ ထက်နည်းသော (သို့) မနည်းသောအချိန်များကြာသည်။ ထိုအချိန်အတွင်း»တိုက်စားမှုများစွာရှိခဲ့ပြီးမူလစီမံကိန်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ»သူမှတ်ချက်ပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိတန်ဂျီယာကျွန်းသည်ရေအောက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်
စိုက်ပျိုးရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်